मौन समयमा केपी ओलीले भने- भोलिको चुनावपछि सरकार अलिकति झोक्राउँछ सरकारले निश्पक्ष चुनावको प्रत्याभूति गरोस्, आयोग मूकदर्शक नबनोस्
२८ आषाढ २०७७, आइतवार | Jul 12, 2020 | 19:55:17
By radiojanakpur on	 May 13, 2017 अन्तरवार्ता, देश, प्रमुख समाचार, राजनीति
स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्यामा मौन समयको अवधि पारेर पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको तीव्र आलोचना गरे । सरकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेर धाँधलीलाई प्रश्रय दिइरहेको भन्दै ओलीले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।
भोट माग्न पाइने मौन समयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने- ‘म निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईहरु निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारमा निर्णायक हुनोस् । निर्वाचन आयोगप्रति जनताको विश्वास छ । निर्वाचन आयोग निरीह र मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन ।
भोलिको चुनावपछि सत्ताधारी पक्ष झोक्राउने दाबी गर्दै ओलीले भने-‘भोलिको चुनाव परिणामपछि उहाँहरु अलिकति झोक्राउनुहुन्छ, मंसिर ३१ पछि पूरै झोक्राउनुहुन्छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष ओली कसरी प्रस्तुत भए भन्नेबारे यहाँ सामान्य चर्चा गरिएको छः
मुस्लिम समुदायको वकालत
आफ्नो मन्तव्यको सुरुमा एमाले अध्यक्ष ओलीले दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ मा गराउन लागिएको प्रति सरकारको कडा विरोध गरे । जेठ ३१ मा मुस्लिम समुदायको रामझान परेकाले सो समयमा भोकै बसेका मुस्लिमहरुले मतदान गर्न वा उम्मेदवार बन्न नसक्ने ओलीले बताए ।
‘मुस्लिमको रमजान जेठ १३ देखि असार १४ सम्म हुन्छ । राज्य धर्म निरपेक्ष भनिए पनि सबै धर्मप्रति राज्य संवेदनशील हुन्छ भन्नेमा छौं । तर, सरकार सम्वेदनशील भएन । यो सरासर एउटा समुदायमाथिको अपमान हो’ ओलीले जेठ ३१ को चुनावको विरोध गर्दै भने-‘हामीले सरकारलाई पटक पटक भन्यौं । १५ लाख अर्थात् ५ प्रतिशत जनसंख्या भएको मुस्लिम समुदायले उम्देवार हुन पाउने कि नपाउने ? सबैले हुन पाउनुपर्छ । मतदानमा जान पाउनुपर्छ । ‘
केपी ओलीले जेठ ३१ कै चुनावमा बढी केन्दि्रत हुँदै भने-‘यो विल्कुलै अनुचित छ । जसलाई-मस्लिमहरुलाई) मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गरियो । यो धेरै गम्भीर विषय हो । राज्य यस्तो एकलकाँटे, गैरजिम्मेवार कसरी हुन मिल्छ ?’
जेठ ३१ को चुनाव सार्नेबारे आफूले बैशाख ९ गते नै सरकारलाई सम्झाएको ओलीले बताए । उनले भने- ‘मैले बैशाख ९ गते प्रधानमन्त्रीलाई भनें । अब त सार्नलाई समय छैन भन्न सक्नुहुन्छ, तर बैशाख ९ गतेसम्म त समय थियो होला नि ?’
काठमाडौंमा मुस्लिम मतदाताहरुलाई पहिलो चरणको चुनावमा आकषिर्त गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीले जेठ ३१ को प्रशंग अलि लामै कोट्याए ।
आफूले गत मंसिरमै स्थानीय चुनाव गर्न भनेको स्मरण गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मंसिरमै स्थानीय चुनाव गरेको भए अहिले प्रादेशिक चुनाव भइसक्ने बताए । चुनाव गर्न नचाहने सरकारले बल्ल बल्ल चुनाव घोषणा गरे पनि अनेक गलत मनसायले दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ गतेलाई सारिएको ओलीले बताए ।
सरकारमाथि तीव्र प्रहार
विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले जेठ ३१ को चुनावले मुस्लिम समुदायलाई अन्याय गरेको व्याख्या गरिसकेपछि कांग्रेस-माओवादी को सरकारमाथि प्रहार सुरु गरे ।
ओलीले भने- ‘यस्तै बेलामा रकमान्तर गर्नुहुन्छ, पीडितलाई पैसा वितरण गर्न अग्रसर हुनुहुन्छ । विभिन्न काम, ठेक्कापट्टाका लाइसेन्स दिनुहुन्छ । यसमा हामीले गम्भीर प्रश्न उठायौं ।’
कांग्रेस र माओवादीप्रति खनिँदै ओलीले भने-‘म सोध्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई, तपाईहरु देशलाई कता लैजान चाहनुहुन्छ ? के यसैगरी निर्वाचन स्वच्छ हुन्छ ? भ्रष्टाचारको पैसा वितरण गर्ने, यसरी चुनाव धाँधलीरहति हुन्छ ? विपक्षीमाथि शारीरिक हमला गर्ने, यही हो उहाँहरुको प्रजातान्त्रिक योगदान ?
मारिएकालाई सहीद घोषणा गर्न माग
एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तापक्षबाट मारिएका आफ्ना कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गर्न र घाइतेको उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।
ओलीले भने-‘माओवादीले हत्या गरिरहेको छ । बीएण्डबी, टिचिङ अस्पतालमा विरामीहरु छन्, जिल्ला अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पतालमा घाइते भएर लडिरहेका छन् । मन्त्रीहरु पैसा बाँड्न जाने, योजना बाँड्न जाने, के यही हो आचार संहिता ?’
बिस्फोटन कसले गरायो ?
कतिपय जिल्लामा भइरहेका बम विस्फोटनका घटना पनि सत्तापक्षले गराएको हुन सक्ने ओलीले आशंका गरे । उनले पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न गरे-‘यी बिस्फोटनहरु कसले गराइरहेका छन् ? जिम्मा लिएकाले मात्रै हो कि जिम्मा नलिएकाले पनि गराएको हो ? एमालेका प्रचार सामाग्रीहरु डिस्ट्रोय गराइयो । उहाँहरुसँग बंग्याउने, भाँच्ने कला रहेछ, यतिसम्म बेइमानी गर्न सक्नुहुन्छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले तमासा देखाइरहेको भन्दै तमासा बन्द गर्न आग्रह गरे । उनले भने- ‘म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो तमासा बन्द गर ।’
स्थानीय तहको संख्या थप्नु धाँधली हो
मुस्लिम समुदायप्रति सहानुभूति र दोस्रो चरणको चुनाव अनि आचार संहिताको कुरा गरिसकेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयको आलोचना गरे ।
दोस्रो चरणको चुनावअघि स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्न नपाइने ओलीले बताए । उनले भने-‘११ जिल्लामा उहाँहरु निर्लज्ज ढंगले फेरि स्थानीय तहको संख्या बढाउने भन्दै हुनुहन्छ । यो धाँधली नभए के हो ? यति निर्लज्जता त पञ्चायतले पनि गर्दैनथ्यो ।’
चुनावको घोषणा भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या बढाउनु आचारसंहिता विपरीत एवं धाँधलीपूर्ण कार्य भएको ओलीले बताए । उनले आक्रोशित हुँदै भने- ‘अहिले संख्या हेरफेर गर्न प्रक्रिया सुरु भएको छ, म निर्वाचन आयोगलाई सोध्न चाहन्छु अहिले २८३ स्थानीय तहमा चुनाव हुँदैछ, दोस्रो चरणमा ७४४ मध्ये कति स्थानमा आयोगले चुनाव गर्दैछ ? किन जिब्रो चपाउँछ निर्वाचन आयोग ?’
राजपाका मागमा चुनावपछि छलफल
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टीले राखेका मागहरु जेठ ३१ को चुनावपछि पूरा गर्न सकिने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भने-‘उसले जानेको छ, एउटा राजपालाई देखाइदिने । राजपाले धाँधली गरेमात्रै मान्छु कहाँ भनेको छ ? राजपाले आचारसंहिता उल्लंघन गर कहाँ भनेको छ ? उसका मागलाई निर्वाचनपछि छलफल गर्न सकिएला ।’
स्थानीइ तहको संख्या थप्ने सरकारको योजनालाई ओलीले दादागिरीको संद्दा दिए । उनले भने-‘यो त दादागिरी भयो । चुनाव सुरुभएपछि संख्या हेरफेर दुनियाँमा काहीँ हुन्छ ?’